Nhau dzeBhaibheri: Mbongoro Inotaura - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Wakambonzwa nezvokutaura kwembongoro here? Ungati: ‘Aiwa.’ ‘Mhuka hadzigoni kutaura.’ Asika Bhaibheri rinozivisa nezvembongoro yakataura. Ngationei kuti kwakaitika sei.
VaIsraeri vanenge vatogadzirira kupinda muKanani. Bharaki, mambo weMoabhi, anotya vaIsraeri. Saka anotuma nhume kumunhu akachenjera anonzi bharami kuti agouya kuzoshurikidza vaIsraeri. Bharaki anopikira kupa Bharami mari zhinji, Bharami anotasva mbongoro yake ndokuenda kundoona Bharaki.
Jehovha haadi kuti Bharami ashurikidze vanhu Vake. Saka anotuma ngirozi ine munondo murefu kundodzivisa Bharami pamugwagwa. Bharami haangaoni ngirozi, asi mbongoro yake inoiona. Zvino mbongoro inoedza kutsaukira ngirozi, uye pakupedzisira inovata pamugwagwa. Bharami atsamwa kwazvo, anorova mbongoro yake netsvimbo.
Ipapo Jehovha anoita kuti Bharami anzwe mbongoro yake ichitaura kwaari. Mbongoro yakabvunza kuti: ‘Ndamuitireiko zvokuti munofanira kundirova?’
‘Wandiita sebenzi,’ Bharami anodaro. ‘Dai ndaiva nomunondo ndaizokuuraya!’
‘Ndakambokuitirai zvakadai kare here?’ mbongoro inobvunza.
‘Aiwa.’ Bharami anopindura.
Ipapo Jehovha anoonesa Bharami ngirozi inomunondo imire pamugwagwa. Ngirozi inoti: ‘Warovereiko mbongoro yako? Ndauya kuzokudzivisa, nokuti haufaniri kuenda kundoshurikidza Israeri. Kudai mbongoro isina kunditsaukira, ndingadai ndakuuraya, asi ndingadai ndisina kukuvadza mbongoro yako.’
Bharami anoti: ‘Ndatadza. Handina kuziva kuti umire pamugwagwa.’ Ngirozi inorega Bharami achienda, uye Bharami anopfuurira kundoona Bharaki. Anoedzazve kushurikidza Israeri, asika, panzvimbo pakwo, Jehovha anomuita kuti akomborere Israeri katatu.
Bharaki ndiani, uye nei achituma munhu kunodana Bharami?
Nei mbongoro yaBharami ichivata mumugwagwa?
Bharami anonzwa mbongoro ichiti chii?
Ngirozi inoti chii kuna Bharami?
Chii chinoitika Bharami paanoedza kutuka Israeri?
Verenga Numeri 21:21-35.
Nei Israeri akakunda Mambo Sihoni wevaAmori naMambo Ogi weBhashani? (Num. 21:21, 23, 33, 34)
Verenga Numeri 22:1-40.
Ndeipi yakanga iri vavariro yaBharami mukuedza kutuka vaIsraeri, uye zvidzidzoi zvatinogona kudzidza ipapa? (Num. 22:16, 17; Zvir. 6:16, 18; 2 Pet. 2:15; Jud. 11)
Verenga Numeri 23:1-30.
Kunyange zvazvo Bharami akataura sokunge aiva munamati waJehovha, zviito zvake zvakaratidza sei zvakapesana? (Num. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)
Verenga Numeri 24:1-25.
Nhoroondo yeBhaibheri iyi inosimbisa sei kutenda kwedu mukuitwa kwechinangwa chaJehovha? (Num. 24;10; Isa. 54:17)